Ndị na-ekesa mmiri Service Ọrụ Ahụike • Hospitallọ ọgwụ • Ọfịs • Clinic Warsaw
Need chọrọ onye na-enye mmiri mmiri n'ụlọ ọgwụ, ụlọ ọrụ dọkịta, ụlọ ọgwụ? Companylọ ọrụ Water Point na-enye onyinye ndị na-abụghị mmiri cylinder, ndị na-akersụ mmanya, isi mmalite nke ndị isi ụwa na ụlọ ọrụ ahụ, nke anyị bụ ndị nkesa naanị na Poland.
Lọ ọgwụ, ụlọọgwụ ahụike na ụlọ ebe ana - ahụju anya bụ ebe ndị mmadụ chọrọ nlekọta na enweghị elele na ọnụnọ ahụike. Mgbe ụfọdụ oge nchere maka usoro ahụ na-aba ogologo. Enwerekwa ikpe ebe ndị ọrịa na-anọ n’ụlọ nlekọta ahụike enyere maka ụbọchị, izu ma ọ bụ ọnwa.
Ọ na --emekarị ka enye ezinụlọ nri ma ọ bụ ndị enyi ọzọ nri ma ọ bụ ihe ọ drinksụ additionalụ ndị ọrịa ma ọ bụ ndị a tụrụ mkpọrọ. Agbanyeghị, nke a ezughi. Ikwesiri inweta nri ọhụụ, dị ụtọ ma sie ike mmiri, enwere onye ọ bụla na - eleta ụlọ ọgwụ ma ọ bụ ebe nlekọta ahụike, yana ndị ọbịa niile na ndị ọrụ.
Anyị na-atụ aro maka ndị a mmiri ọ drinkingụ dispụ ndị na-a drinkingụ mmiri ezubere maka ụlọ ọgwụ na ebe nlekọta ahụike ebe mmiri ga-enwerịrị ezigbo ụkpụrụ. Ndị na-enye mmiri mmiri maka ụlọ ọgwụ bụ ihe a pụrụ ịdabere na ya nke nwere ike inye ndị ọrịa, ndị ọbịa na ndị ọrụ mmiri ọ drinkingụ topụ kachasị mma.
Site n'enyemaka ndị ọkachamara, ndị na-enye mmiri ọ waterụ canụ nwere ike hụ na ịdị ọcha na nchekwa nke iji.
Mmiri dị mma, ahụike ga-eme ka ọrụ ahụike dịkwuo mma, ọnụ ahịa ị na-arụkwa ụdị ngwa ahụ dị obere.
Ndị na-akingụ mmiri na-a Dụ mmiri, isi iyi na isi iyi na-enye mmiri dị ọcha ma dị ọcha nke na-ezute ihe gbasara ịdị ọcha na ọrịa chọrọ.
Na mgbakwunye, ngwaọrụ ndị a mara mma na nke ọgbara ọhụrụ, iji ya abụghị nsogbu ọ bụla maka ụmụaka na ndị agadi.
Enwere ike idobe mmiri na-arinụ mmiri na paseeji, ụlọ nchere na mpaghara ebe niile. Ezubere ha iji hụ na nkasi obi nke iji ma n'otu oge ahụ anaghị enwe nsogbu nje nje. Enwere ike iji ha na ọfịs na ọfịs.
Igwe ọ andụ tastyụ dị ọcha ma dị ụtọ bụ nkwa maka ahụike anyị na ọkachasị ndị ọrịa ma ọ bụ ndị na-adịghị ike, yana ndị ọrụ na ndị na-etinye aka na nlekọta ndị ọrịa kwesịrị ịnweta ya dị mfe.
A na-eji mmiri na-a Dụ mmiri ọ ofụ ofụ mee nke kachasị mma, nke na-eme ka ọnọdụ teknụzụ dị mma na ọdịdị nke ngwaọrụ ahụ ogologo oge. Nhazi oge a dabara na ebe ọha na eze na ụlọ ọgwụ, ebe ahụike na ụlọ ọgwụ ga-abụ ọ bụghị naanị azịza bara uru, kamakwa ọchọ mma nke ebe enyere.
Ndị na-ewepụta ihe nwere usoro dị elu na-echebe megide mmiri na-enweghị nchịkwa na ihe nchebe kwesịrị ekwesị.
Ndị na-a waterụ mmiri mmiri guzobere n’ụlọ ọgwụ na-echekwa oge na ohere ma nwee mmetụta dị mma na gburugburu ebe obibi.
Ngwaọrụ ọgbara ọhụrụ a na-enye mmadụ niile nọ n'ụlọ ọgwụ, ụlọ ọgwụ ma ọ bụ ụlọ ọgwụ Sanatorium mmiri doro anya gburugburu elekere.
Ọ bụkwa ihe mmezi na gburugburu ebe obibi na akụ na ụba, n'ihi na ịkwesighi ichegbu onwe gị banyere ibuga karama mmiri buru ibu, na-echekwa ha, ma tinye ihe mkpofu.
igwe eji ere mmirimmiri anaghị akwụ ụgwọ n’ụlọ ọgwụonye na-enye mmirionye na-enye mmirionye na-enye mmirionye na-enye mmiri mmiri carbonatedonye na-enye mmiri ọgwụ n’ụlọ ọgwụmmiri mgbazinye ụgwọ mgbazinye mmirimgbata mmirindị na-enye mmirimmiri ọ drinkingụ drinkingụ na mmiri ọgwụ n'ụlọ ọgwụgassing mmiriIgwe nju oyi na onye na-enye mmiriigwe gassing mmirindị na-a drinụ mmanya n’ụlọ ọgwụNgwaọrụ maka mmiri gassingngwaọrụ maka mmiri carbonatedmmiri maka ahụikemmiri maka ahụ ikemmiri maka ụlọ ọgwụmmiri na-amị amị site na mgbata ahụmmiri n’ọfịs dọkịtammiri n’ime ụlọ ọgwụ ikemmiri mmiri